Maal-qabeen u dhashay Dalka Japan oo Xabad kaluun ah ku iibsaday Lacag dhan million dollar | Mandheera News
Maal-qabeen u dhashay Dalka Japan oo Xabad kaluun ah ku iibsaday Lacag dhan million dollar
Tokyo(Mandheeranews)Nin u dhashay dalka Japan, caanna ku ah maqaaxiyo lagu iibiyo hilibka kalluunka ayaa lacag dhan 1.8 milyan oo doolar ku iibsaday kalluun aad u weyn.
Ninkan ayaa kalluunka ka iibsaday bandhigga suug geynta sannadka cusub oo sanadkii ba mar lagu qabto caasimadda Tokyo ee Japan.
Warbaahinta Dowladda Japan ayaa kusoo warrantay in Kiyoshi Kimura oo isugu yeera “boqorka kalluunka” uu maqaaxiyo badan ku leeyahay dalkaas, kalluunka uu iibsaday miisaankiisuna uu dhan yahay 276 kiilo.
Kalluunkan aadka u weyn ayaa la sheegay in laga soo qabtay xeebaha waqooyiga dalka Japan, waxaana Kimura uu sheegay in kalluunka uu yahay qaali, balse uu aad ugu faraxsan yahay in uu noqdo qofkii ugu horeeyay ee sanadkan iibsada kalluunka ugu weyn.
“Haa, kalluunka waa qaali, waxaana doonayaa in macaamiisheena ay sanadkan cunaan kalluun dhadhan leh,” ayuu Kimura u sheegay wakaaladda wararka ee AFP.
Kalluunkan oo afka qalaad lagu yiraahdo Bluefin ayaa ahaa kan ugu weyn ee halkaas lo soo iib geeyay, waxaana hey’ad inta badan wax ka qorta noolasha xayawaanaadka oo lagu magacaabo World Wildlife Fund ay sheegtay in uu kalluunkaas noolaan karo muddo dhan 40 sano.
Ma ahan markii ugu horeysay oo uu ninkan lacag aad u badan ku iibsaday kalluun, oo waxay ahayd sanadkii hore, xilligaas oo uu lacag badan ku iibsaday kalluun aad u weyn.
Maal qabeenkan u dhashay dalka Japan ayaa sanad kahor sidan oo kale lacag dhan $3.1 malyan oo doolar ku iibsaday kalluun weyn oo ah nooca loo yaqaanno Tuna.
Ninkan ayaa kalluunkaas ka iibsaday bandhigga suug geynta sannadka cusub oo lagu qabtay suuq kalluunka lagu iibiyo oo dhawaan laga furay magaalada Tokyo ee caasimadda dalka Japan.
Kiyoshi Kimura, oo ah nin si iskiis ah dhaqaale uga sameeyay iibinta raashinka Japan ayaa ku caan baxay iibsashada kalluunka noocaas ah.
Kalluunkan weyn ee uu hadda iibsaday oo culeyskiisu uu yahay 278kg ayaa ah nooca loo yaqaanno bluefin tuna, waana mid halis ugu jira inuu ka dabar go’o dunida.
Waxa uu ku bixiyay kharash laban laab ka badan kii uu sannadkii 2013-kii ku iibsaday kalluun kale oo noocaan ah. Xilligaas ayuu Mr Kimura kalluunkaas ku iibsaday lacag dhan $1.4 malyan oo doolar.
“Waxaan iibsaday Tuna fiican”, ayuu ku yiri wakaaladda wararka ee AFP, ka dib markii uu soo idlaaday bandhigga suuqa.
Dadka sida jumlada ah wax u iibiya iyo milkileyaasha makhaayadaha cuntada Japan ee Sushi ayaa inta badan lacago faro badan ku bixiya kalluunkaas oo ah nooca ugu fiican, looguna jecel yahay.